Khudbaddii madaxweynaha ee Shir-Madaxeedka Afrika. | www.maandeeq.webs.com/
Khudbaddii madaxweynaha ee Shir-Madaxeedka Afrika.
Posted on February 1, 2010 by indhodeeq
Monday 01 February 2010 07:38 PM
Madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ugu horreyn waxa uu u mahad celiyay guddoonkii hore ee Midowga Afrika oo uu sheegay in uu wax badan u qabtay Midowga Afrika, waxa uuna guddoomiyaha cusub ee Midowga Afrika u rajeeyay in uu si wanaagsan u guto howsha loo xilsaaray.
Madaxweyne Shariif waxa uu uga mahad celiyay dowladda Ethiopia iyo shacabka Ethiopia, sida ay u marti galiyeen shir-madexeedka Afrika, sidoo kale waxa uu ka tacsiyeey dadkii ku dhintay diyaaraddii laga lahaa dalka Ethiopia ee dhawaan ku burburtay dalka Lubnaan xilli ay ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Bayruut.
Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu khudbaddiisa ku soo hadal qaaday dhul gariirkii ka dhacay Haiti oo dad aad u fara badani ku dhinteen , isagoo muujiyay in ay murugada la qeybsanayaan shacabka reer Haiti.
Waxa uu u mahad celiyay Midowga Afrika iyo dadaallada uu ku bixinayo sidii xasillooni loogu soo celin alhaa Somaliya iyo go’aannada Somaliya khuseeya ee ay mar walba qaataan.
Ciidammada Midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga magaalada Muqdisho ayuu madaxweynuhu sheegay in ay kaalin udub dhaxaad ah ka qaateen fashilinta afgambigii fashilmay ee kooxaha fallaagada ah ee Shabaab, Alqaacidda iyo takfiirka qas-wadayaasha ahi ku doonayeen in ay ku ridaan dowladda Somalia.
Waxa uu sheegay Alqaacidda iyo fallaagada ay taageeraan ee Alshabaab ay yihiin takfiir, dadka oo dhan gaalnimo ku xukumay, isla markaana doonaya in ay ridaan dhammaan nidaamyada caalamka ka dhisan oo dhan.
Waxa uu madaxweynuhu khudbaddiisa ku sheegay in ciidammada Midowga Afrika ay si wanaagsan u guteen howshii nabad ilaalineed ee loo xilsaaray ayna u joogeen Muqdisho, isagoo si gaar ah ugu mahad celiyay dowladaha Uganda iyo Burundi oo uu tilmaamay in ay yihiin labada dal ee kaliya ee ciidammo u soo diray Somalia, ayna dhab ka tahay in deganaansho iyo nabad lagu soo celiyo Somalia.
Madaxweynuhu waxa uu ka codsaday dalalka kale ee Afrika in ay iyaguna ciidammo u soo diraan Somaliya si ay u buuxiyaan baahida ammaan ee ka jirta Somalia.
Madaxweyne Shariif waxa uu tacsi u diray dowladaha Uganda iyo Burundi iyo eheladii ay ka dhinteen askartii Amisom ee cadowgu ku dilay Muqdisho iyagoo ku guda jiray howl gal ay ku difaacayeen shacabka soomaaliyeed , karaamadiisa iyo xukuumaddiisa gaar ahaan.
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in xaaladda dalka Soomaliya ay adkaatay ayna dhinacyo badan u kala faaftay, loona baahan yahay in xal loo helo, sidaas darteed ayuu madaxweynuhu ka codsaday midowga Afrika in ay sii laba jibbaaraan dadaalladooda ku aaddan nabad u helista Somalyia.
Waxa uuna codsaday in dowladdiisa laga gacan siiyo arrimaha soo socda oo kala ah:
1- In kaalmo la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee dagaallada ku wax yeelloobay ee ku sugan gudaha iyo dibadda.
2- In dib u dajin loo sameeyo isla markaana loo suurto galiyo in ay isku filnaadaan dadka soomaaliyeed ee ku bara kacay dagaallada.
3- In la kordhiyo ciidammada midowga Afrika ee ku sugan Soomaliya, laguna taageero wax kasta oo ay u baahan yihiin oo dhaqaale,hub iyo agab milatari ah, lana gaarsiiyo ciidammadaasi ilaa 8000 oo ah caddadkii midowga Afrika u qoondeeyay in ay ka howl galaan Somalia.
4- In la sii laba jibbaaro dadaallada Africa ee ku wajahan tababarka ciidammada dowladda KMG ah ee Somaliya si ay u noqdaan ciidammo xoog leh oo awoodi kara in ay soohdimaha Soomalia ka ilaalilyaan argagixisada iyo dambiilayaasha caalmiga ah oo khatar ku ah amniga Somalia iyo dalalka dariska la ah.
5- In taageero dhan walba ah la siiyo xukuumadda Somalia, lana dhiirri galiyo tallaabooyinkeeda ku aaddan wada hadalka wax dhisaya.
6- Si xaaladda Somalia caadi loogu soo celiyo arrintu waxay u baahan tahay in la dedejiyo howlaha looga jeedo dib u dhiska dalka,hay’adaha iyo danaha dowladda.
7- In dowladda Somalia dhaqaale lagu taageero,si xaaladda dalku u degto isla markaana ay dowladda ugu suurto gasho in ay canshuuro qaaddo , kana faa’iidysato khibradeheeda laga heli karo dalka gudihiisa.
Madaxweyne Shariif waxa uu khudbaddiisa ku sheegay sanad ka dib dhismihii dowladda Somalia ee lagu soo yegleelay dalka Djibouti, inkastoo ay jireen dhibaatooyin iyo carqalado soo food saaray hadana ay ku guuleysatay qabashada waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin:
1- Dowladdu waxay kooxaha ka hor jeeda ugu baaqday in wada hadal, waxa ayna ku guuleysatay in ay qaarkood dowladda ku soo biiraan, sida garab ka mid ah ururka Xisbul islaam, haatanna dowladdu waxa ay isku dayeysaa in ay heshiis la saxiixato Culimaa’udiinka Ahlusunna Waljamaaca.
2- Dowladdu waxay aas-aastay qeybihii kala duwanaa ee ciidammada qalabka sida ee Somaliya, iyadoo sidoo kalena la xoojiyay horumarinna lagu sameeyay ciidammada booliska, si ay u noqdaan kuwo awood u leh in ay muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dalkaba ka ilaaliyaan khatarta qas-wadayaasha ku xad gudbaya madaxbannaanida iyo midnimada dalka.Arrintaas ayuu madaxweynuhu tilmaamay in ay ku dhacday rabitaanka shacabka soomaliyeed iyo taageerada beesha caalamka iyo midowga Afrika.
3- Kaamooyin la gaarsiiyay dadka ku waxyeelloobay dagaallada ka soconaya dalka, inkastoo arrintaasi aysan u dhicin sidii loogu tala galay, waxaana ugu wacan ayuu yiri madaxweynuhu kooxaha rabshadaha wada oo boob iyo kharbudaad kula kaca kaalmada ku socota dadka tabaaleysan.
4- Waxaa dib u habeyn iyo dib u howl galin lagu sameeyay hay’adihii dowladda, waxaana tababarro la siiyay shaqaalihii dowaldda si kor loogu qaado awooddooda shaqo iyo kartidooda xirfadeed.
5- Waxaa dib loo soo nooleeyay kaalinta hay’adihii dhaqaalaha sida bangigii dhexe, dekadda iyo garoonka diyaaradaha.
6- Waxaa la dajiyay hab maamul cusub oo la dagaallama musuqa dhanka maamulka ah, kuna shaqeeya hab loo wada jeedo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda muddadii ay shaqeyneysay ay soo foodsaareen dhibaatooyin xoog leh oo ay ugu khatar sanaayeen weerarkii Shabaab iyo Alqaacidda oo is garab sanaya ay ku soo qaadeen dowladda, si ay u ridaan, kaas oo dowladdu fashilisay.
Alqaacidda ayuu madaxweynuhu tilmaamay in ay khatar ku tahay caalamka oo dhan ayna dooneyso in ay fowdo ka riddo dalka kasta oo xasilloon si ay uga hesho meel ay ku dhuuntaan hoggaamiyayaashooda baxsadka ka ah caddaaladda dalalkooda.
Madaxweyne Sh.Shariif waxa uu ammaanay dadaallada soo noqnqoday ee beesha caalamka iyo dowladaha gobolku ugu jiraan in xal kama dambeys ah laga gaaro dhibaatada ka aloosan Somalia, isagoos I gaar ahna u tilmaamay QM, IGAD iyo Jaamacadda Carabta.
Waxa uu madaxweynuhu rajo ka muujiyay in xalka Somalia uu ku imaan doono gacmaha shacabka soomaalyeed.
Dowladaha deeqda bixiyana waxa uu ka dalbaday in ay ka dhabeeyaan ballan qaadyadii lacageed ee ay u yabooheen Somalia oo wali soo gaarin dowladda iyo hay’adaha dowliga ah lagu daba galin in ay fuliyaan ballan qaadyadoodii, waayo xaaladda Somalia ka jirtaa waxay u baahan tahay gargaar deg deg ah iyo joojinta dhiig soconaya.
Filed under: Khudbaddii madaxweynaha ee Shir-Madaxeedka Afrika. |
« DAAWO SAWIRADA HORDHACA AH EE SHIRKA ADDIS ABABA KASOCDA MA DOONAYSAA IN AAD QURAANKA XIFDISO? »